Ku abuuro bandhigyo fudud oo qurux badan Spice-up-ka dugsiga hoose OS | Laga soo bilaabo Linux
Isticmaalayaasha Dugsiga Hoose iyagu waxay haystaan ​​codsi furan oo furan oo furan oo la yiraahdo Xawaash taas ayaa u oggolaan doonta u samee bandhigyo fudud oo qurux badan qaab fudud, dhakhso leh oo xirfad dhamaystay. Qalabku wuxuu leeyahay fikrad soo bandhigid cadaalad ah oo casri ah oo dareen leh kuna saleysan a fikradda ka timid naqshadeeye Caleb Riley.
1 Waa maxay Spice-up?
2 Sidee loo rakibaa Spice-up?
2.1 Ku rakib Spice-up on Ubuntu-ku-saleysan distros
Waa maxay Spice-up?
Waa codsi furan oo furan, oo lagu sameeyay vala, oo leh is-dhexgal aad u casri ah oo dareen leh, kaas oo noo oggolaanaya abuuro bandhigyo fudud oo qurux badan iyadoon loo baahnayn tilmaamo isku dhafan. Qalabka waxaa loo soo saaray in loo isticmaalo Elementary OS, laakiin waa inuu si sax ah uga shaqeeyaa wixii ku saabsan Urotu-ku-saleysan distroor
cunt Xawaash waxaan abuuri karnaa bandhigyo cajaa'ib leh, oo aan ku kobcin karno sawirrada, qaababka, qoraallada, qaabab kala duwan iyo qaabab, is-dhexgal ama sooyaal soo jireen ah iyo habeyn kasta oo aan dooneyno inaan ku darno.
Bandhigyada lagu abuuray Spice-Up ayaa lala wadaagi karaa isticmaalaha, Waad ku mahadsantahay nidaamkeeda dhoofinta PDF-ka wanaagsan, si la mid ah, waxaan ku eegi karnaa soo bandhigyada biraawsar kasta oo leh riixitaan gujis ku saleysan wacan.
Xawaash-Up es la jaan qaada noocyo badan oo USB ama aalado Bluetooth ah, kaas oo u oggolaanaya hagidda iyo xakamaynta bogagga silig la'aan. Sidoo kale, qalabku wuxuu ku qalabeysan yahay tiro badan oo sheylo ah si aan ugu abuuri karno bandhigyo qurxoon waqtiga diiwaangelinta iyo qaab xirfadeed si caddaalad ah u dhisan.
Qalabku wuxuu na siinayaa suurtagalnimada in lagu sawiro sawiradeena aaladaha dib u habeynta dibada, marka sawirada wax laga badalo waxaa si otomaatig ah loogu cusbooneysiin doonaa bandhigyadayada, waqtiga ayaa naga badbaadin doona iyo kordhinta waxtarka ama tayada sawirada la isticmaalay.
Waxaa muhiim ah in la ogaado Felipe Escoto, abuuraha Spice-Up, wuxuu hayaa cusbooneysiin joogto ah aaladda iyo mahadnaqa bulshada loo abuurey agagaarka mashruuca, cusbooneysiintani si dhakhso leh ayey u kici kartaa.
Sidee loo rakibaa Spice-up?
Isticmaalayaasha dugsiga hoose waxay si fudud ugu rakibi karaan Spice-up ka soo bilow Elementary, tag bogga xiga link oo rakibi Spice-up si fudud.
Ku rakib Spice-up on Ubuntu-ku-saleysan distros
Inta kale ee adeegsadayaasha ku-saleysan Ubuntu waa inay ku rakibaan Spice-Up barnaamijka ppa, iyagoo marka hore fulinaya ku-tiirsanaanta soo socota:
Marka ku-tiirsanaanta kor ku xusan la rakibo, ordo amarradan soo socda waxaadna ku raaxeysan kartaa abuurista bandhigyo fudud oo qurux badan oo leh qalab fudud, dareen leh iyo qalab casri ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Ku abuuro bandhigyo fudud oo qurux badan Spice-up-ka dugsiga hoose OS
Waxaa jira codsi lagu maareeyo AD-da daaqad kasta, dalabka waxaa loo yaqaan RSAT, ma waxaa jira wax ku jira Linux (iyo qaybintiisa) oo aan isku mid ku sameyn karo?
Ppa-ku ma haysto xirmo Ubuntu 17.04, xilligan, oo isku dayaya in la rakibo xirmada 17.10 waxay bixisaa qalad ku tiirsanaan, si loo arko haddii ay hagaajinayaan.
Halkan ku joogso oo waxay ku siiyaan jawaabta sida loogu rakibo Ubuntu, Salaan
Kuwa loogu talagalay khaladka ku tiirsanaanta, kaliya raac talaabooyinkan barta:
sudo add-apt-rep pitory ppa: hoose-os / maalin kasta
sudo apt-get rakib pantheon-files pantheon-files-plugin-dropbox
Waxaa lagu tijaabiyay xubuntu 16.04, waxaan qiyaasayaa inay wali ku shaqeyso 17.10
Wixii qaanso weyn ayey u shaqeysaa
yaourt -S xawaash-up
Sida loo qaabeeyo martigeliye Apache dalxiis oo ku yaal Debian